भ्रमपुर्ण समाचार प्रती कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले जनाए आपत्ति – सडक मिडिया
भ्रमपुर्ण समाचार प्रती कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले जनाए आपत्ति
काठमाडौं चैत्र २३: नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले भ्रमपुर्ण हेडलाइन बंगाएर समाचार सम्प्रेषण गरेर बदमासी गरेको भन्दै आ’पत्ती जनाएका छन्। प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा मध्यावधि मागेको शिर्षक बनाएर रिपोर्टर्स नेपाल नामक अनलाइनले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर, महतले आफुले अहिले कोरोनाको सं’क्रमणका कारण विश्व प्रताडित बनिरहेका बेला आफुले मध्यावधि निर्वाचनको माग नै नगरेको बताए ।
आफुले सरकारको आलेचना गरेको सहन नसक्नेहरु अहिले मध्यावधि मागेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा वि’रोध गरिरहेको पनि उनले बताए । ‘पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने अहिले मध्यावधि चाहियो भनेर मैले भनेको कतै पाउनुहुन्न,’ महतले नेपालमार्गसँग कुरा गर्दै भने, ‘ यस्तो विपतको बेलामा पनि भ्रष्टाचार हुनथाल्यो । सरकारले राम्रोसँग जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन । त्यसकारण संक्रमण सकिइसकेपछि देशमा के अवस्था आउनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न उपाय हुनसक्छ । जसमध्ये मध्यावधि पनि हुनसक्ला भनेको थिएँ । त्यसलाई बंगाएर हेडलाइन राखेर समाचार बनाइयो ।’ उनले हेडलाइन मात्र हेरे प्रतिक्रिया नदिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा मेडिकल सामाग्री खरिदमा भएको घोटाला छानविन गर्न माग गरेका थिए ।
महतले अन्तर्वार्तामा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री एवं कोरोना रोकथामका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पोख्रेलले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमासकेको बताएका थिए । ‘ अहिले सरकार ठेक्का रद्द ग¥यौं भनेर चोखिन खोजेको छ । सामान ल्याइसकेको छ, त्यसको के हुन्छ ? त्यसको पैसा उहाँहरुले तिर्दैहुनुहुन्छ हुन्न । त्यत्रो खर्च गरेर प्लेन लगेको के हुन्छ रु प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्यमा गर्न खोज्दै थिए तिनीहरुलाई पूर्ण रुपमा वाइपास गरेर गरिएको छ ।
उता उप–प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यो खरिददेखि लिएर सं’क्रमणलाई रोक्ने संयन्त्र बनेको छ । उहाँकै पहलमा सम्पूर्ण कानुन, नियम मिचेर यी कामहरु भइराखेका छन् ,’महतले भनेका थिए, ‘यो एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि बिरामी भएको अवस्थामा उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण संयन्त्र बनेको छ । उहाँहरुले यसको स्पष्ट रुपमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानविन गरेर कसले बदमासी गरेको छ, दो’षीमाथि कडा का’रबाही हुनुहुपर्छ।
Previous Post: काेराेना : कुन देशकाे अवस्था कस्ताे ? यसरी हेर्न सकिन्छ Live
Next Post: भ्रष्ट सरकारको आयु जति लामो हुन्छ त्यति नै जनताले दु:ख पाउँछन् : नेता गुरुङ